1-Go’aanso markaad u baahantahay.
2-Dhaqanka iyo shaqsiyadda
4-Fahan ha ka sugin
5-Dhib iyo Caqabad
6-Baahida la cuno
8-Kaligiis gar naqdase
10-Danta iyo duruufta yeesan ku joojin.
11-Adiga ayaa leh go’aankaaga
Waxay duufsan karaan aragaaga, maqalkaaga, qalbigaada iyo dareenkaaga, taas oo haddii aad u ogolaatid kaa dhigaysa mid ayaga u hogaansan oo aan jiha uu raaco aan lahayn.
Ku qaddari dareenkooda iyo fikradahooda, ku diid ama ku ogolow waxa ay sheegayaan ama ay soo bandhigayaan, balse yeysan saamayn ku yeelan jihada aad u jeedo.
Qof walba xaq ayuu u leeyahay jihaynta hadafkiisa, sidaas si la mid ah waa dabicii in qof walba uu jecelyahay in dadku maqlaan, u riyaaqaan, arkaan, dareemaan, ugu dambayntana ku raacaan yoolkiisa, taasna qof ku qaldan ma jiro oo dhammaanteen madaxa ayaa inoo wada duuban, doonistaasna waa darajada uu ku hamminayo qof walba, adiga ayaa leh go’aankaaga mar walba.
12-Iftiin iyo Mugdi
Dunida waa dareen, sida mar walba uu dareenkaaga yahay ayuu muuqaalkeeda noqdaa, iftiin isaga oo jiro ayaa hadana laga yaabaa in aad mugdi dareento si la mid ah mugdiga in uu iftiin kula noqdo.
marka aad dareenkaaga iyo rabitaankaada aad si dhab ah u raaci wayso oo aad noqoto qof marka xaalad ay lasoo darasto xaaladdaas ku qiimeeya naftiisa, waxaa kugu dhacaya jahwareer nololeed waana midka hadda ku haysta.
haddii waxa aad rabtid oo dhab u dareemayso aad sugan lahayd wax badan oo maanta aad ka shallaysantahay kama shallayseen.
Daciifnimada dumarka ayey ka mid tahay in aysan garan karin halka qalbigooda u sido.
15-La yaabka Nolosha
La yaabka nolosha wuu badan yahay, laakin la yaab haddaad maqasho waa wax aan aqoon loo lahayn oo garasho dhab ah loo lahayn, wax la yaqaan ama filashadooda la wada sugayo la yaab ma yeeshan.
Dadku waa kuwa u taagan jawaab celinta wax walba oo ay noloshu la soo darrisaa,
Laga yaabee marka hore in ay la yaabaan laakin marka ay gartaan ayey isu diyaariyaan jawaab celin
Waxaanu nahay Umad u taagan in ay ka jawaab celiso wax walba oo noloshooda ku dhaco.
Way wanaagsantahay mararka qaar in laga gaabsado amaba aan wax jawaab ah loo celin Nolosha,.
16-Isha iyo Dhagta
Isha ayaa kaa aaminsan dhagta, maqalka sidiisaba xaqiiqda kama tarjumo, indhaha waxay farriinta xaqiiqda ah u gudbiyaan Qalbiga, halka dhagaha ay farriin aragagax iyo nacayb ah u gudbiyaan sida badan gudaha.